२ करोड १७ लाख नेपालीलाई को’रोनाविरु’द्धको भ्या’क्सिन दिइने, खोप ल्याउन ती’व्र तयारी ! – yuwa Awaj
काठमाडौ : कोरोना भाइ’रस विरु’द्धको भ्याब’क्सिन परीक्षण सफल हुनासाथ २ करोड १७ लाख नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउने यो’जनासहित सरकारले तयारी थालेको छ । प्राथमिकता र जो’खिमका आधारमा भ्या’क्सिन दिइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना छ ।
के’न्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड १ लाख ६९ हजार ४ सय १९ छ, जसमध्ये २ करोड १७ लाख २१ हजार ९ सय ८१ जनालाई को’रोनाविरु’द्धको भ्या’क्सिन लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी छ । को’भिडको भ्या’क्सिन १५ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र दिइनेछ ।
परीक्षण प्रमा’णित हुनेबित्तिकै भि’त्र्याइने
स्वास्थ्य सेवा विभागअ’न्तर्गत तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं ‘खोप व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी समितिका संयोजक डा। श्यामराज उप्रेतीले विश्वमा बनिरहेका को’भिडविरु’द्धको भ्या’क्सिन १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ट्रा’यल नगरिएको बताए । नेपालमा २८ प्रतिशत जनसंख्या १४ वर्षमुनिका छन् ।
को’भ्याक्स फ्यासि’लिटीमार्फत २० प्रतिशत भ्या’क्सिन निःशुल्क ल्याइनेछ । ५२ प्रतिशत नागरिकलाई भ्या’क्सिन लगाउन आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले बेहो’र्नुपर्नेछ । त्यसका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको प्रार’म्भिक अनुमान छ ।
हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले को’रोना भाइ’रसवि’रुद्धको खो’पको व्यवस्थापनका लागि द्रु’त कार्य योजना कार्या’न्वयनमा ल्याएको छ । को’रोना भाइ’रसविरु’द्धको भ्या’क्सिन व्यवस्थापनका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले बताए । यस्तै, भ्या’क्सिन उत्पादन परीक्ष’ण भइरहेका देशसँग कूट’नीतिक प्रयास थालिएको सहप्रवक्ता डा। अधिकारीले बताए ।
नेपालमा खोप भण्डारण गर्ने माइनस ७० डिग्री से’ल्सियसको कोल्ड चेन नरहेकाले फाइजरको खो’प आउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । सरकारले माइनस २० डिग्री सेल्सि’यससम्म ताप’क्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने खोपका लागि तयारी गरेको छ । नेपालमा दिइने खोप २ देखि ८ डि’ग्री सेल्सि’यस ताप’क्रममा भण्डा’रण गरिँदै आएको छ ।
सार्क’अन्तर्गत संक्र’मणमुक्त दरमा नेपाल अग्र’स्थानमा
सार्क राष्ट्रअन्तर्गत कोरो’ना भा’इरस संक्र’मणमुक्त हुने दरमा नेपाल अग्र’स्थानमा रहेको पाइएको छ । भारतपछि सबैभन्दा धेरै नेपालमा सं’क्रमणमुक्त भएको पाइएको छ ।वल्र्ड’मिटरका अनुसार हालसम्म भारतमा कुल सं’क्रमितमध्ये ९४ दशमलव २८ प्रतिशत संक्र’मणमुक्त भएका छन् । यस्तै, नेपालमा कुल संक्रमि’तमध्ये ९३ दशमलव ४० प्रतिशत संक्र’मणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै, माल्दिभ्समा कुल संक्रमि’तमध्ये ९२ दशमलव ८१ प्रतिशत, भुटानमा ९१ दशमलव २७ प्रतिशत, पाकि’स्तानमा ८५ दशमलव ३१ प्रतिशत, बंगलादेशमा ८२ दशमलव ६८ प्रतिशत, अफगा’निस्तानमा ७८ दशमलव ६८ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७३ दशमलव १८ प्रतिशत संक्र’मणमुक्त भएका छन् ।
हालसम्म इन्डियामा ९६ लाख ८ हजार ४ सय १८ जना संक्रमि’तमध्ये ९० लाख ५८ हजार ८ सय २२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा कुल सं’क्रमित २ लाख ३९ ह’जार ८ सय ८५ जनामध्ये २ लाख २४ हजार ५३ जना संक्रम’णमुक्त भएका छन् ।
माल्दिभ्समा कुल सं’क्रमित १३ हजार १ सय ४३ जनामध्ये १२ हजार १ सय ९९ जना संक्र’मणमुक्त भएको कोरोनाको रेकर्ड राख्दै आएको वल्र्ड’मिटरमा उल्लेख छ । भुटानमा कुल संक्र’मित ४ सय २४ जनामध्ये ३ सय ८७ जना संक्रम’णमुक्त भएका छन् ।
पाकिस्तानमा कुल संक्र’मित ४ लाख १३ हजार १ सय ९१ जनामध्ये ३ लाख ५२ हजार ५ सय २९ जना संक्रम’णमुक्त भएका छन् । बंगलादेशमा ४ लाख ७५ हजार ७ सय ८९ जना संक्र’मितमध्ये ३ लाख ९३ हजार ४ सय ८ जना संक्र’मणमुक्त भएका छन् ।
वल्र्डमि’टरका अनुसार अफगानिस्तानमा ४७ हजार ६ सय ४१ संक्र’मितमध्ये ३७ हजार ४ सय ८५ जना संक्रम’णमुक्त भएका छन् । श्रीलंकामा २६ हजार ५ सय ५९ जना सं’क्रमितमध्ये १९ हजार ४ सय ३८ जना संक्रम’णमुक्त भएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
Prevहाम्रो करबाट पालिने सांसद र प्रदेशहरु अति धेरै भयो, यो क’टौती नगरेसम्म देशको विकाश हुदैन डा.रुईत…चित्तबुझे सेयर गरौं गर्नुहोस ।
Nextक्रसर उद्योगीको दादा’गिरी सामु सरकार ला’चार…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि
निरन्तर बत्ती जान थालेपछि झस्किए मन्त्री पुन !
लकडाउनले गर्दा भो’काएका मानिसहरूलाई हवाई विमान बाट घरघरमा खाना पु’र्‍याउँदि यी पाइलट…हेर्नुहोस् ।